Rohan'ny S-23 (1010396-29-8) mpanamboatra - Phcoker Chemical
SKU: 1010396-29-8 Sokajy: Serasera Sarmana
Sari-tsary roaton'ny S-23 (1010396-29-8)
Rohany S-23 roahina (1010396-29-8) Description
Ny siramamy S-23 roapolo dia sokajin'ny fanafody antsoina hoe SARM, izay modulator mpanara-maso androgen mpanara-maso, ka mety ho lehilahy hormonal contraceptive. S 23 amin'ny fomba ofisialy mivantana, izay midika fa azo atao amin'ny alalan'ny fanafody sy kapsules izy io. Ny fianarana dia nampiseho ny S23 mba hampitomboina ny hozatry ny tavy sy ny skeletal rehefa mihena ny tavy. Ny fifandraisana amin'ny androgen receptor (AR) kokoa (miaraka amin'ny Ki ao 1.7nM) raha oharina amin'ny fanafody efa zatra toy ny Andarine, sy ny fandinihan'ny biby dia mampiseho ny fihavanana tsara amin'ny anabolika amin'ny endriky ny androgenic, ary ny fihenan'ny spermatogenese miaraka amin'ny fanarenana an-tsokosoko rehefa tapitra ny fikarohana.
Rohany S-23 roahina (1010396-29-8) Specifications
Product Name Rohan'ny S-23
Anarana simika (S) -N- (4-Cyano-3-trifluoromethylphenyl) -3- (3-fluoro, 4-chlorophenoxy) -2-hydroxy-2-methyl-propanamide, SARM S-23, UNII-XDK89456WM , CHEMBL512283, XDK89456WM, CCTH-methylpropionamide, SCHEMBL2816700, BDBM26261, DB07419, C-31, S 23, B5R
Drug Class SARS, Inhibitors
molekiolan'ny Formula C18H13ClF4N2O3
molekiolan'ny Wvalo 416.7540328
Monoisotopic Mass 416.055 g / mol
mitsonika Point 133-136 ° C
Ny antsasaky ny biolojia 11.9 ora
Row S-23 vovoka Application Ny tabilao / tabilao mofomamy S-23 ampiasaina ho lahy hormona mandaitra, dia afaka mampitombo ny masin'ny muscle, mampihena ny fatiantoka
S-23 dia sokajin'ny zava-mahadomelina vaovao antsoina hoe modifier amin'ny sela mpanome safidy (SARM). Ny SARM dia mamono testosterone amin'ny fifehezana ny solosaina hormonina amin'ny ampahany voafaritra amin'ny vatana.
Tahaka ny testosterone sy SARM hafa, ny voly S-23 dia mikendry ny hozatry ny taola sy ny taolana mba hampiroborobo ny fitomboan'ny taova sy ny fahasalaman'ny taolana. Tsy toy ny testosterone, ny poezia S-23 dia tsy mikendry ny vatan'ny prostate ka tsy miteraka ny fampitomboan'ny prostate. Mifanohitra amin'izany, ny fanadihadiana dia mampiseho fa ny S23 dia mampihena ny haben'ny prostate.
Ny siramamy S-23 dia lasa malaza kokoa amin'ny fiaraha-monina bodista. Azo lazaina fa mahomby amin'ny fampitomboana ny hatavezina ny tebiteby ary mihena ny tavy isaky ny misy fihenam-bolo kely. Na izany aza, ny sotrokely S-23 dia mety hamongotra ny level testosterone, izay mitaky ny mpampiasa mila fitsaboana post-cycle (PCT).
S-23 vovoka (1010396-29-8) Mechanism of Action
Ny SARM dia miasa amin'ny fifamatorany amin'ny mpanolo-tsaina androgen izay hita ao amin'ny taolana sy ny hozatra. Miankina amin'ny rafitra simika ao aminy, ny SARM samy samihafa dia samy manana ny lanjany.
Ny ampahany amin'izay mahatonga ny S-23 SARM tena mahomby dia ny fahafahany mifatotra amin'ny receptors androgen. Fa ny S-23 dia manana fiantraikany miavaka amin'ny taolana sy ny hozatra. Amin'ny ankapobeny, ny SARM dia mikasa ny hanentana ny fototarazo tompon'andraikitra amin'ny fananganana proteinina hozatra ary manao izany amin'ny fifehezana ny androgens. Rehefa mavitrika izy ireo, dia afaka manampy amin'ny fanentanana ny sela fananganana bone ny masoivohon'ny vatana.
Ny S-23 dia manakiana ny fanafoanana ny fihenan'ny LH sy ny FSH, izay mitarika ho amin'ny fiantraikany amin'ny fanabeazana azy, fa ny voka-dratsiny dia tsy maharitra fotsiny. Miorina amin'ny fikarohana natao tamin'ny raty lahy, ny S-23 dia manana ny antsasaky ny ora 11.9. Ny vatana dia mitombo manodidina ny 96% amin'ny SARM rehefa nalaina am-bava ary afaka mahatratra ny haavony ny mpampiasa aorian'ny ora 4 na izany.
soa ny S-23 vovoka (1010396-29-8)
▪ Mampitombo ny tavy ny S-23 ary mampihena ny tavy
▪ S-23 amin'ny fitantanana ny lahy
▪ Mampitombo ny herin'ny taolana ny S-23
▪ Ny S-23 dia mampitombo ny fiterahana ara-piraisana ara-nofo
Soso-kevitra S-23 Recommended (1010396-29-8) Dosage
Ny fampahalalana tokana azonay dia miorina amin'ny fianarana biby. Ohatra, ny ratin'ny laboratoara dia nomena 0.1 mg isan'andro amin'ny 3 mg isan'andro nandritra ny fikarohana, na am-bava na tamin'ny alalan'ny fampidirana.
Ny ankabeazan'ireo mpandinika bakteria dia mitondra 10 amin'ny 30 mg isan'andro ary manasaraka ny dosage ho roa mba hampitombo ny antsasaky ny zava-mahadomelina. Ny ankamaroan'ny mpitsikera ao amin'ny aterineto dia nilaza fa nampiasa S-23 izy ireo ho isan'ny fizarana 8-herinandro.
Side effects ny S-23 vovoka (1010396-29-8)
▲ herisetra. Nisy ny tatitra momba ny hatezerana raha vao mandray an'i S-23, ka mety tsy ho ny safidy tsara ho an'ireo izay manana olana momba ny hatezerana.
▲ Testosterone Shutdown. Araka ny hevitr'ireo mpampiasa, ny S-23 no zavatra akaiky indrindra amin'ny steroids amin'ny fomba mahazatra izay azonao atao ao amin'ny tsenan'ny SARM. Izany dia mahatonga azy io ho miavaka sy mahery kokoa, miaraka amin'ny fiantraikany hafa izay tsy mitovy amin'ny SARM hafa.
▲ Dierre Urine.S-23 dia naseho tamin'ny famokarana loko maizim-borona maivana, saingy io fihenam-bidy io ihany koa dia maharitra sy maharitra ihany raha mandeha bisikileta amin'ny S-23.
▲ Fijoroana vavolombelonaNy bodybuilders dia nanamarika ny fihenitr'izy ireo nihena tamin'ny fampiasana ny S-23 ary izany dia notohanana tamin'ny fikarohana siantifika izay nampiseho ny vokany.